Manuel Lanzini Child Story Story na-emeghị ihe ọ bụla
Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Manuel Lanzini Child Story Story na-emeghị ihe ọ bụla
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara “Na ọla“. Anyị Manuel Lanzini Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Erik Lamela Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Nkọwa
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ịba ụba ya mana mana ole na ole tụlere Manuel Lanzini's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ nke Manuel Lanzini - Mmalite na Ndụ Ezinụlọ:
Malite, Manuel Lanzini mụrụ na 15th ụbọchị nke February 1993 na Ituzaingo, Argentina. A mụrụ ya na mama ya, Mariam Tajera (nwunye ụlọ) na nna ya, Hector Lanzini (otu ndị na-agba egwú oge otu).
Carlos Tevez Nwa Akụkọ Gbasara Eziokwu na-enweghị isi
N'ịbụ onye na-etolite n'obodo Ituzaingo nke Argentina nke a maara nke ọma maka ọrụ ndị dị egwu, nwa agbọghọ Lanzini gbara ịhụnanya gburugburu site na ndị egwuregwu ya na-ahụ n'anya ma na-akwado ya.
Ndị nne na nna Lanzini nwere afọ ojuju na ya na nwanne ya nwoke Tomaz (bụkwa ndị egwuregwu bọọlụ ọkachamara na eserese n'okpuru) ọ bụghị naanị na ha hụrụ egwuregwu ha ga-etolite kamakwa gosipụtara atụmanya nke ịbụ football maestros.
Ọ Theirụ ha zuru ezu karị mgbe Lanzini, n'agbanyeghị na ọ na-egwu bọl n'okporo ámá, gosipụtara nzube nke mbụ site na ịzụta tiketi iji lee efere Osimiri (ụlọ ya kacha amasị ya). Ọ bụ naanị oge tupu ha debanye aha ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ụlọ dị nso, Kaly de Ituzaingó ebe mbụ ọ rụrụ ọrụ ya ma tinye ụgbọ mmiri maka ọkachamara.
Manuel Lanzini Biography Eziokwu - Bulọ Ọrụ Buildup:
Mgbe Lanzini nọ na Kaly de Ituzaingó, o gosipụtara ọmarịcha nkà na atụmanya nke mere ka ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu chọọ ọrụ ya maka klọb dị iche iche. Ihe a na-ahụ anya n'etiti onyinye ndị ahụ bụ nke Ramon Maddoni bụ onye ama ama ama ama na Argentina chọrọ ịkpọrọ ya na Boca Juniors maka ule egwuregwu.
Otú ọ dị, Lanzini jụrụ ihe niile ọ na-enye n'ihi na ọ na-echegbu onwe ya karị maka igwu egwu maka klọb nke nwata. Nrọ ya ghọrọ eziokwu mgbe a kpọrọ ya ka ọ bịa n'osimiri dị na 2002.
Ọ malitere iso ndị otu egwuregwu nke otu egwuregwu wee gosipụta isi maka arụmọrụ n'agbanyeghị obere ogo ya. Na ịchọta nkwalite nye ndị otu klọb na 2010, ọ mere mmalite ya maka klọb ahụ n'oge 3-0 Plate na-emeri Central akwụkwọ mgbe ọ bụ agadi 17.
Manuel Lanzini Biography-Bilie Iji Maara Aha:
Lanzini enwetaghị uche zuru ụwa ọnụ ọ kwesịrị ka ọ nọ na Osimiri Plate ruo mgbe a gafere ya na West Ham ebe ọ ga-egwu na egwuregwu kachasị ele anya na ụwa-Njikọ Premiya na England.
Ogologo oge mbufe oge a hụrụ Lanzini na-eyi Famous maroon na acha anụnụ anụnụ nke West Ham na nkwekọrịta nke bịara na nkebi nke ime nkwekọrịta ya na-adịgide adịgide.
Sergio Aguero Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Akwukwo Nsogbu
Lanzini magburu onwe ya n'oge mbụ ya na hama. Ngosipụta ya mara mma dọtara uche nke ndị otu Elite na Europe mana West Ham mere ngwa ngwa site n'inye ya nkwekọrịta na-adịgide adịgide nke ọ nabatara nke ọma. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere nwunye Manuel Lanzini, Mer Lafuente:
N'etiti onye ọ bụla na-aga nke ọma na ndị Argentine na-agba ọsọ, e nwere nnukwu egwu ma ọ bụ enyi nwanyị dị ka a hụrụ na Mer Lafuente.
Gonzalo Higuain Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Mer Lafuente bụ onye mmepụta ejiji na onye ọka iwu. Ihe atụ zuru okè nke ịma mma na obi ike bụ ndị yiri ka ha bụ egwuregwu zuru okè maka Lanzini.
Ọ naghị arụ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ ezie na ha alụbeghị di na Lanzini, ha abụọ nwere otu nwa aha ya bụ Benjamin.
Ọ bụ naanị oge tupu agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ga-amalite ịkụgharị maka Manuel Lanzini na Mer Lafuente.
Eziokwu Manuel Lanzini - Ihe kpatara akpata egbugbu:
Ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ na-enwe mmasị ịmịị ahụ nke ahụ enweghị nghọta ma mana egbugbu aka ekpe nke Lanzini bụ nke gosipụtara ịhụnanya na ịdị n'otu ezinụlọ.
Ọ gbakwunyere foto dị n'okpuru ebe a na-egbu egbu na aka ekpe ya na peeji nke Instagram ya na ihe odide "Ekwela ka ị jee ije naanị". Ọnwụ ahụ na-egosi Lanzini na nwa ya nwoke ka ha yi uwe akwa efere Osimiri, na-agagharị na onyonyo nke ihu ya na nke ndị mụrụ ya na-amụmụ ọnụ ọchị site n'elu.
Manuel Lanzini Biography Eziokwu - Ọ bụghị naanị nọmba uwe elu:
Ọnụ ọgụgụ 10 nọmba ahụ bụ nke kachasị ọkachamara kachasị dị ka uwe Maradona, Zidane, Messi, Pele etc. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-enwe mmetụta nke Prestige, Flair na nkwanye ùgwù.
Dị ka nwata, Lanzini na-ekiri vidiyo nke Maradona mana ụfọdụ Pablo Aimar bụ onye nlereanya ya na Lanzini na-enwe mmetụta nke igwu egwu dịka arụsị ndị ọ na-ele anya dịka nwatakịrị mgbe ọ bụla ọ na-eburu nọmba ahụ bụ 10 Jersey.
“Pablo Aimar bụ akụkọ mgbe ochie, ana m asọpụrụ ya. Ọ na-ejikwa obi ụtọ na-achịkwa bọl ahụ, ọ maara nke ọma na onye na-agba bọl. Achọrọ m igwu egwu dị ka ya. ”
Manuel Lanzini Biography - Onye Na - edekọ Ihe:
Dịka El Classico (Barcelona na Real Madrid) na-aga Spain, Manchester derby (Manchester United na Manchester City) na England, Old Firm derby (Celtic vs Rangers) dị na Scotland, Argentina kwenyesiri ike na ọ bụ otu n'ime ọgụ kachasị asọmpi na ụwa a na-akpọ SuperClassico. SuperClassico na-enwe nsogbu dị ọkụ n'etiti Boca Juniors na Plate River.
Ruo oge, Manuel Lanzini nwere ihe mgbaru ọsọ kasịnụ na akụkọ ntolite derby, na-eche naanị 43 sekọnd mgbe kickoff gasịrị. Ọ bụ ihe ndekọ nke nwere ike iwepụ ọtụtụ narị afọ.
Ebumnuche kpatara Aha njirimara:
A kpọrọ Manuel Lanzini “La Joya”Nke asughariri dika“Na ọla”N'oge ọ bụ nwata na West Ham na-egosi nnukwu onyinye ọ nyere na ụlọ ọrụ ahụ, karịsịa ike ya iji dribble ma mee ka ndị na-agbachitere ya n'oge ọsọ ọsọ.
Okwesiri ighota na “Na ọla”Na-anọchite Diamond, nkume dị oke ọnụ nke na-akọwa ụzọ West Ham si leba anya na nnweta akụ ha
Ueldị Manuel Lanzini:
Lanzini bụ onye ọkpụkpọ kpebisiri ike na ọ ga-akwụsị ihe ọ bụla iji gosi onwe ya dị ka ihe bara uru. Nke a pụtara ìhè n'ụzọ e nyere ya aha njirimara nke na-enye mmetụta nke uru. Karịsịa, ọ hụrụ n'anya na ọ na-aga n'ihu ma na-ekwenyeghi na ike.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Manuel Lanzini Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Breel Embolo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Simon Kjaer Storymụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
Emi Buendia Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Marcos Rojo Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke